Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Amalungelo abantu » Kumbhobho, Kwindlu ephalaziweyo yehobe: Apho bahlala bangenamakhaya khona
inkcubeko • Amalungelo abantu • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Apho kuhlala khona abantu abangenamakhaya
Njengabantu abaninzi abangaphangeliyo kwaye uninzi lushiye ngasemva kwirente okanye ekubambeni ngento yakho, ukungabi namakhaya kuya kusiba sisibetho ngakumbi ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Kwabo banethamsanqa, abo bazifumana bengenamakhaya bayakwazi ukuhlala namalungu osapho emakhayeni abo.
Kulabo bengenandawo bangaya kuyo, kukho iindawo zokufihla intloko, kodwa indawo incinci.
Ke abo bazifumana besezitratweni bafumene iindlela ezizodwa zokujongana nokuswela indawo yokuhlala.
Mhlawumbi olona hlobo luqhelekileyo lwezindlu zethutyana yintente. Zikhula njengoluntu oluncinci ezindleleni nakwiipaki ngokukhawuleza njengoko amakhowa ekhula ngobusuku obunye. Iidolophu ezininzi zenza "ukutshayela" kwaye zinyanzela abantu abangenamakhaya ukuba bahambe, kodwa bafumana iinkampu ezintsha ezifudukela kwenye indawo ngosuku olulandelayo. Ngumdlalo oqhubekayo wokuqengqa idayisi kunye nokuhamba ngapha kwebhodi yomdlalo weMonopoly yokungabi namakhaya.
Ngaphantsi kweebhulorho ziindawo eziqhelekileyo apho abangenamakhaya Ukuqokelela kwaye ngokufuthi kuhlala kunoluntu ngokubanzi. Kuyanceda ukuba nekhusi ngaphezulu kwimozulu kwaye ungabonakali emehlweni prying emehlweni abo bangenamakhaya. Uninzi lwezi ndawo ziinkampu, iidolophu ezincinci, ezisisiseko samakhulu abantu abambalwa.
Uninzi lwabasandula ukuhlala bengenamakhaya, baseneemoto zabo kwaye bahlala khona. Ukuhlala kwisithuthi kubizwa ngokuba yiNdlu yokungabinakhaya, kwaye iyonyuka kwizixeko eziseMelika. Bangaphezulu kwe-16,000 abantu abahlala kwizithuthi zabo eLos Angeles, California, bebodwa.
Kwezinye iidolophu, kuye kwamkelwa imithetho ukulwa abo bangenamakhaya ukusuka ekulaleni ubusuku bonke kwizithuthi zabo. Ezinye izixeko ezineentliziyo ezinobubele zisebenzisa indawo yokupaka abantu ukuba bapake ebusuku balale ezimotweni zabo. Isigunyaziso sinokuthi uWalMart unokuxolela iimoto ezichitha ubusuku kwindawo yokupaka.